बोर्डरमा पाएकाे त्यो पीडाः खाना र पानी समेत थिएन, कोरोना नसरेर के सर्छ त! – PathivaraOnline
Home > समाचार > बोर्डरमा पाएकाे त्यो पीडाः खाना र पानी समेत थिएन, कोरोना नसरेर के सर्छ त!
बोर्डरमा पाएकाे त्यो पीडाः खाना र पानी समेत थिएन, कोरोना नसरेर के सर्छ त!
admin September 8, 2020 समाचार	0
नेपाल-भारत सीमानाका बाँकेको जमुनाहमा पुगेका नेपालीहरुले दुई दिनदेखि खाना र पानी राम्रोसँग नपाएको गुनासो गरेका छन् । ज्याला मजदुरीका लागि भारत गएका नेपाली लकडाउन भएपछि नेपाल फर्कने क्रममा अलपत्र परेका थिए । १५ दिनअघि सीमा पुगे पनि त्यहाँबाट भारत फकाईएको सिमकोट गाउँपालिका–२ हुम्लाका वीरेन्द्र बोहोराले जानकारी दिनुभयो । “हामीलाई सीमाबाट फर्काइएपछि भारतको बाबागञ्जमा लिएर क्वारेन्टाइनमा राखियो । १५ दिनपछि बिहीबार राति ९ः०० बजे देखि राम्रोसँग खाना र पानी पाएका छैनौँ”, बोहोराले भन्नुभयो ।
सीमाका नेपालीलाई प्रजिअको समन्वय हुने
कोरोना सङ्क्रमण फैलिनबाट रोक्नका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई मद्दत गर्ने र अति सीमान्तकृत समुदाय विशेषगरी जोखिममा रहेका बालबालिकासम्म स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गराउने काम प्राथमिकता रहेको सेभ द चिल्ड्रेनका कार्यक्रम प्रबन्धक अरुणकान्त पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले यो महामारीको समयमा हस्तान्तरित स्वास्थ्य सामग्रीले कोरोनाको प्रभावकारी रोकथाम, उपचार र व्यवस्थापनमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । – शुरबहादुर सिंह
आजबाट लकडाउन हटे पनि के–के गर्न पाइँदैन? जानिराखाैं